RASMI: Garsooraha Kulanka El Clasico Barcelona vs Real Madrid Ee Habeen Dambe Oo La Shaaciyey Iyo Xusuusta Koobkii Ugu Dambeeyey Ee Real Madrid Ka Qaadday Barcelona Ee Uu Garsooray - Cadalool.com
RASMI: Garsooraha Kulanka El Clasico Barcelona vs Real Madrid Ee Habeen Dambe Oo La Shaaciyey Iyo Xusuusta Koobkii Ugu Dambeeyey Ee Real Madrid Ka Qaadday Barcelona Ee Uu Garsooray
Xidhiidhka kubadda cagta waddanka Spain ayaa ku dhawaaqay garsooraha dhex-dhexaadin doona ciyaarta semi-finalka Copa del Rey is-aragga koowaad ee Barcelona iyo Real Madrid, taas oo habeen dambe ka dhici doonta garoonka Camp Nou.
Labadan kooxood ayaa bishan gudaheeda ku kala calaf-qaadi doona tartanka Copa del Rey oo uu midkood u gudbi doono finalka oo ay iskugu iman doonaan Valencia iyo Real Betis midka soo badiya, hase yeeshee waxa ka horreeya dagaal iyo xamaasad aan dhamaad lahayn oo Barcelona iyo Real Madrid ay Arbacada toddobaadkan iyo Arbacada ugu dambaysa bishan February iskaga hor imanayaan.
Marka ay Barcelona habeen dambe marti-geliso Real Madrid, waxay mar kale is ballansan doonaan 27 February oo ay garoonka Santiago Bernabue isla tegi doonaan, waxaana ugu xigi doonta kulankooda labaad ee horyaalka LaLiga oo afar maalmood kaddib ay isla garoonka Madrid ku ciyaari doonaan.
Haddaba xidhiidhka dalka Spain ayaa waxa uu ciyaartan u doortay inuu dhexdhexaadiyo garsooraha caanka ah ee Mateu Lahoz oo ahaa siidhi-wadihii hayey ciyaartii finalka Copa del Rey ee sannadkii 2014 ay Real Madrid koobka kaga qaaday Barcelona, taas oo uu Gareth Bale dhaliyey gool cajiib ah oo uu orod kaga dheereeyey difaaca Barca.
Mateu Lahoz oo lagu yaqaano in go’aamo adag uu qaato, isla markaana ay kooxaha qaarkood ku eedeeyaan inuu ciyaaryahannada isku daawado oo aanu khaladaadka fudud qabanin, ayaa waxa uu markanna dhexdhexaadin doonaa kulanka kubadda cagta ee ugu weyn dunida.
axa qaybta muuqaallada VAR fadhiyi doona De Burgos Bengoetxea oo ahaa garsoorihii kaadhka cas siiyey Cristiano Ronaldo finalkii Spanish Super Cup ee sannadkii 2017, xili uu CR7 u muuqday inuu is tuuray.
Lahoz iyo Bengoetxea ayaa iska kaashan doona inay u garsooraan labada kooxood, iyagoo midkoodana uu gaadhi doono go’aamada garoonka gudihiisa, wixii muran ka yimaaddana uu Bengoetxea kasoo garnaqi doono.